Virus အမျိုးအစားများနှင့် Virus ကာကွယ်နည်းများ ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Antivirus Softwares , ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ , ဖြေရှင်းနည်းများ » Virus အမျိုးအစားများနှင့် Virus ကာကွယ်နည်းများ
By သန့်ဇင်ဌေး4:13 AM27 comments
Topic မစခင် မေးခွန်း တစ်ခု မေးကြည့်ချင်တာက မိသားစုဝင်တွေ viruses, spyware, scareware, trojans, နဲ့ worms တွေ အကြောင်း ဘယ်လောက်တောင်များ နားလည် ထားကြပါသလဲ - ဒီလို မေးခွန်းမေးလိုက်လို့ ကျွန်တော် က သူတို့နဲ့ ပတ်သတ်လို့ အများကြီး သိနေခဲ့လို့ မဟုတ်ပါဘူး - ကျွန်တော့် မိသားစုဝင်တွေကို နေ့စဉ်နီးပါး တစ်ယောက် မဟုတ် တစ်ယောက်ကို ဒုက္ခလိုက်ပေးနေတဲ့ ဒီ Virus တွေ အကြောင်းကို ကျွန်တော် သိနားလည် ထားသလောက်လေး မျှဝေချင်လို့ပါ။
အဲတော့ ကျွန်တော်တို့ viruses, spyware, scareware, trojans, နဲ့ worms တွေ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တော်တော် များများလည်း သတိထားမိပြီ - ဘယ်လို ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ Concepts လေးလည်း ချိတ်မိပြီ -
Virus အကြောင်းကို နားလည်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း
very good post and thank you for sharing
monkyaw June 7, 2012 at 11:57 AM
ကျေးဇူးပဲ ကိုနေမင်းမောင်ရေ လေ့လာမှတ်သားသွားပါတယ်..
ကျေးဇူးတင်ဘာတယ်ဆိုတဲ့ စကားထက်ပိုပြီးနက်ရှိုင်းတဲ့စကားလုံးမျိုးရှိနေတယ်ဆိုရင် အဲဒီစကားလုံးကို
ခဏဘဲဖြစ်ဖြစ် ပြောချင်ဘာတယ် ကိုနေမင်း ကျနော်က လေလာနေတဲ့သူတယောက်မို ကိုတိုင်ခံစားဖူးတော့
ဒီလိုအကြောင်းလေးတွေသိခွင့်ရတာ အများကြီးဝမ်းသာပါတယ် နောင်လည်း အမြဲတန်းအားပေးနေမှာပါ။
Tun Tun June 8, 2012 at 2:16 PM
Tun Tun June 8, 2012 at 2:31 PM
Ko, what is your top choice antivirus?
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက သူများတွေ virus ပြောလို့သာ လိုက်ပြောရတယ်။ သေချာသိတာမပာုတ်ဘူး။ အခုမှပဲ သိတော့တယ်။
အရမ်းကောင်းတယ် ဒီ post က
tunnaing June 19, 2012 at 6:19 PM
Ko Phyo June 19, 2012 at 8:15 PM
phone win July 3, 2012 at 7:04 PM
sithuinternetgame August 7, 2012 at 10:38 PM
မသိတာတွေကိုအခုလို ပြောပြပေးတဲ့ အကိုနေမင်းမောင် ကိုအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်....အကိုဆိုဒ်ကို ခဏခဏ ၀င်ကြည့်ပါတယ်အကို....အောင်မြင်ပါစေ....
Moe Moe.Save September 15, 2012 at 9:53 AM
Thank your share to us brother*v*
oungnai zaw November 21, 2012 at 9:31 PM
ကို နေမင်းမောင်တို့ လို လူမျိုး လောကကြီးမှာ များများပေါ်နိူင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းမိပါတယ်။ကိုနေမင်းမောင် ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
oungnai zaw May 18, 2013 at 10:09 PM
ဆရာလို့ပဲ ခေါ်ပါရေစေ ဆရာနေမင်းမောင်ရေ။ ဆရာ ဂုဏ်ရည် နဲ့ ထိုက်တန်သူ တစ်ယောက်မို့လို့ပါ။ ဆရာရှင်းပြထားသလို
ဗိုင်းရပ်စ် ကိုက်နေပြီထင်ပါတယ်။ ဝင်းဒိုး အသစ်တင်ထားတာ ဘယ်လောက်မှ မကြာသေးပါဘူး။ ဗိုင်းရပ်စ် ကောင်းတွေကို လိုက်ရှာနေရင်း ဘာဗိုင်းရပ်စ်မှ မတင်ဖြစ်သေးပါဘူး။ word pad ၊ unistaller ၊ snipping tool ၊ dictionary တွေ ဘယ်လိုမှ ဖွင့်လို့ မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ တကယ်အားကိုးပါတယ်။ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဆိုတာ လမ်းညွန်ပေးပါအုံး။ ဆရာ အတွက်
အချိန်တွေကို အနှောင့်အယှက်ပေးမိရင် တကယ်တောင်းပန်ပါတယ်။ ဆရာ နေမင်းမောင် ဒီဘဝရော၊ နောင်ဘဝတွေပါ
အဘက်ဘက်က ပြီးပြည့်စုံတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ တကယ့် ရင်ထဲက ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ ကိုလိုချင်တဲ့ အဖြရအောင်လို့ ဝတ်ကျေတန်းကျေ ပြောတဲ့ စကားမဟုတ်ပါဘူး။ ဆရာ တို့လို့ ဘာမှ ပိုက်ဆံ မရပဲ နဲ့ ဒီလို အချိန်ကုန်ရှင်းပြနေတာကို တကယ်လေးစားလွန်းလို့ပါ။ ဆရာနေမင်းမောင် ကိုတကယ်အားကိုးပါတယ်။ ကျွန်တော်က
အွန်လိုင်းအတွေ. အကြုံ နည်းတဲ့သူပါ။ ငပိန်း တစ်ယောက်လို့ ပြောရင်ရပါတယ်။ ဆရာလည်း ဘေးရန်ခပ်သိမ်းငြိမ်းပြီးတော့ ကျမ်းမာ ၊ ချမ်းသာပါစေလို့ ရင်ထဲက စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာ နဲ့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆရာ အလုပ်များ လို့ မဖြေပေမယ့် နားလည်ပေးမယ့် တပည့် တစ်ဦးလို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။
တစ်ဆက်တည်း ပြောလိုချင်တာကတော့ ဆရာ့ရဲ. အဖြေကို နည်းနည်း အားကိုးစွာဖြင့် စောင့်မျှော်လျှက် စေတနာကို နားလည်တဲ့ တပည့်တစ်ဦး။
aung July 17, 2013 at 9:55 PM
aung July 17, 2013 at 10:06 PM
paingjune August 10, 2013 at 11:21 AM
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်...ဆရာကြီး..မသိတာကို သိအောင်ပြောတဲ့ အတွက်
lovely to family
ဓမ္မဝတီသားလေး January 24, 2014 at 11:36 PM
aaq January 31, 2014 at 1:08 AM
ဓမ္မဝတီသားလေး January 31, 2014 at 1:19 AM
့htoo thet zaw December 24, 2016 at 2:05 PM